FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABMARANER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labmaraner
Alika mifangaro mifangaro i Labrador Retriever / Weimaraner
Casey (ankavia) ny alika mifangaro ao Labmaraner (Labrador / Weimaraner mix) dia nihalehibe tamin'ny taona 1, niaraka tamin'i Ezra (ankavanana) Weimaraner manga purebred)
Ny Labmaraner dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Weimaraner . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Labraraner
Mpanoratra International Canine Registry®= Labmaraner
'Ity no alika Coletrane, Weimador, dimy taona. Mpikambana tao amin'ny fianakaviako izy hatramin'ny naha alika azy ary henjana ny taona voalohany nifanaovany taminay. Heveriko fa tsy tonga saina isika ohatrinona ny fanatanjahan-tena ary fifehezana ilainy isan'andro. Tena nahay izy ary nianatra daholo ireo baiko mahazatra ao anatin'ny fotoana fohy, fa be koa no nasehony fitondran-tena alika manjaka hatramin'ny voalohany. Na dia nanomboka nandeha azy isan'andro aza izahay dia nitohy ny fitondran-tena. Matetika izy no mivovo sy misento noho izay tadiaviny, nananany fomba fanao ratsy , hoy izy mitsambikina rehefa nitsidika ny olon-tsy fantatra , ary ny ratsy indrindra tamin'ny rehetra nataony mimonomonona raha nanelingelina azy ianao matory amin'ny ny fandriany na raha mihazona zavatra iray izy tsy tokony hanana izy. Betsaka ny tsy fitovizan'ny hevitra amin'ny fomba hiatrehana ireo olana ary tsy nipetraka tao an-trano intsony aho tamin'izay. Nanandrana betsaka ny raiko mikiakiaka sy mivazavaza , manala azy amin'ny efitrano. Nanandrana ny reniko tia azy bebe kokoa ary mamerimberina hatrany ny baiko fa tsy mahomby. Tsy ilaina intsony ny milaza azy, TSY nahazo lalana mifanaraka sy mifanaraka izy. Rehefa niverina tany an-trano aho mba hanampy hikarakara ny renibeko izay mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniko ankehitriny, dia nanomboka nahatsapa aho fa tsy maintsy misy fomba tsara kokoa. Nanomboka namaky boky fiofanana momba ny alika be dia be aho, ary nony farany dia nahafantatra momba an'i Cesar. Nanomboka nampihatra ny teknikany aho ary gaga. Niova tokoa ny fifandraisako amin'ny alikanay. Mitarika azy aho mandeha tongotra isan'andro tsy misy fanitsiana kely dia manaja ahy izy ary mahalana raha toa ka mihaika ny lalàna sy fari-pitsipika napetrako ho azy. Ny sary faharoa dia i Coletrane milamina tahaka ny zanak'olo-mpiray tam-po roa taona. Maniry aho fa afaka milaza fa ny sisa amin'ny fianakaviana dia tsy miovaova araka izay andramako. Na dia tsy naharesy azy ireo tanteraka tamin'ny lalan'i Cesar aza aho, dia hita ny tsy fitovizany amin'ny fihetsiky ny alika amiko sy amin'izy ireo ary mitondra azy ireo miadana (sy Coletrane). '
'Ny fiainantsika niaraka tamin'i Coletrane dia azo antoka fa tsy dia an-tongotra tao amin'ny valan-javaboary, ary mbola betsaka ny asa tokony hatao. Tsy hanome soso-kevitra an'ity hybrid ity amin'ny olona maniry namana mora azo antoka aho. Mahery fo izy, fanahy iniana indraindray , ary mety hizaha toetra ny tompony foana (izay mahatonga ny tsy fitovizan-tena ho zava-dehibe tokoa). Fa izy koa dia be fitiavana, tsy mivadika, manan-tsaina, ary iray amin'ireo alika tsara indrindra eto an-tanàna! Ho mpikambana ao amin'ny fianakavianay foana izy, ary hanohy hanaraka ny fomba fanaon'i Cesar aho mba hahazoana antoka fa manana fiainana sambatra sy voalanjalanja izy ao an-tranonay. '
Coletrane the Weimador (Labmaraner) amin'ny faha-dimy taonany, milamina tahaka ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy roa taona
Rosco the Lab / Weimaraner mix (Labmaraner) alika kely tokony ho 5 ½ volana
'Noraisiko ity sary ity taorian'ny nitondrako an'i Dolche voalohany. Dolche dia Labmaraner 15-taona, izay tena tsara tokoa miaraka amin'ny ankizy sy be feo. Manana toetra be izy ary tsy dia mirehareha eraky ny trano, raha tsy hoe tsy nandeha an-tongotra anio . Na izany aza dia mitaky be dia be izy mitsako kilalao (ny ankafiziny dia panther feno entana). Mahatsapa aho fa amin'ny fampiofanana dia mety ho tsara izy mpiara-miasa jog , ary mino aho fa mahay mandanjalanja izy satria miezaka manampy azy hahalala ny fari-piainany. Mijery ny Dog Whisperer aho ary manandrana mampihatra ny teknikany ary rehefa afaka kelikely dia hitako ny tena valiny. '
maninona ny oran'ny alika lasa mavokely
Boris the Labmaraner (Weimaraner x Lab cross) alika kely amin'ny 5 volana
Boris the Labmaraner (Weimaraner x Lab cross) alika kely amin'ny 5 volana mitsiriritra ny varavarankely
Casey the Labmaraner puppy amin'ny 6 herinandro (Lab / Weim cross)
Casey the Labmaraner puppy amin'ny 6 herinandro - 'Ny reniny dia sôkôla volondavenona madio ary ny rainy dia Weimaraner madio. DOLL izy !!!! '
Hijery ohatra misimisy momba ny Labmaraner
alika bulldog frantsay bulldog mix alika kely
retriever alika kely volamena izay mijanona kely
amboa alika lbs 30 lbs